Hordhac: Getafe vs Real Madrid - Zidane Oo Ciyaartooyo La'aani Hayso, Imtixaanka Ku Sugaya Coliseum & Shaxaha Macquulka Ah - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHordhac: Getafe vs Real Madrid – Zidane Oo Ciyaartooyo La’aani Hayso, Imtixaanka Ku Sugaya Coliseum & Shaxaha Macquulka Ah
Hordhac: Getafe vs Real Madrid – Zidane Oo Ciyaartooyo La’aani Hayso, Imtixaanka Ku Sugaya Coliseum & Shaxaha Macquulka Ah
Real Madrid ayaa caawa u safraysa Coliseum Alfonso Perez oo ay kula soo ciyaarayso Getafe, waxaana tababare Zinedine Zidane sugaya imtixaan adag oo ay tahay in uu ka gudbo si uu ugu dagaallami karo horyaalka LaLiga oo ay ku xafiiltamayaan Atletico Madrid iyo Barcelona.
Kooxda tababare Zidane oo ku jirta kaalinta labaad ayaa waxay hal dhibic ka hoosaysaa Atletico Madrid oo hoggaanka haysa, halka Getafe ay fadhido kaalinta 15aad oo ay afar dhibcood oo kaliya ka sarrayso khadka cas.
Getafe oo saddexdii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey ku dhamaysatay kaalmaha siddeedaad, shanaad iyo siddeedaad, ayaa dhibaatoonaysa xilli ciyaareedkan, waxaana 30 ciyaarood ay ka heshay 30 dhibcood oo kaliya, waxaana dhibco ay lumiyaan maanta ay qarka ugu fuuli karaan in ay khadka cas galaan.
Afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka ayaa dhamaantood ay guulo la’aan ahayd Getafe, waxaana tababare Jose Bordalas uu la’ yahay xeeladdii uu kooxda ugu soo celin lahaa jidka guusha, iyagoo hal guul oo kaliya gaadhay tan iyo January 20. Xaqiiqada ah in Real Madrid ay la ciyaarayaan ayna u hadhsan tahay Barcelona, waxay Getafe ku tahay dhibaato ay suurtogal tahay in xaaladdeeda ay sii xumayso.
Real Madrid ayaa iyaduna bilowgii xilli ciyaareedka dhibaatootay, waxayse jidka guulaha kusoo noqotay qaybta dambe ee xilli ciyaareedka iyagoo u dagaallamaya horyaalka LaLiga iyo Champions League oo ay semi-finalka joogaan.
Barbarrihii goolal la’aanta ahaa ee ay Khamiistii ka gaadheen Liverpool oo ay ugu tageen Anfield ayay ugu soo gudbeen semi-finalka oo ay toddobaadka dambe la ciyaari doonaan Chelsea.
Tababare Zidane ayay kooxdiisu guulo waaweyn gaadhay usbuucyadii ugu dambeeyey, waxaana midda ugu xasuusta badan ay tahay El Clasico oo Sabtidii hore ay Barcelona kaga badiyeen 2-1.
In hal dhibic ay ka dambeeyaan Atletico Madrid oo hoos usoo socotay bilihii ugu dambeeyey, waxay Los Blancos ku dedaalaysaa in aanay bixinin fursad ay ku fasaxdo kooxdan, amaba ay hoggaanka kala wareegaan haddii ay mar kale dhibco lumiso kooxdan ay isku magaalada yihiin.
Marka ay Getafe kala dhamaadaan, Real Madrid ayaa isku diyaarin doonta saddexda ciyaarood ee Cadiz, Real Betis iyo Osasuna iyo sidoo kale Champions League.
Tartanka: Horyaalka Spain ee LaLiga
Getafe waxaka maqan ciyaaryahannada Erick Cabaco iyo Cucho Hernandez oo dhaawac ah, waxaana sidoo kale aan diyaar u ahayn Dario Poveda, Enes Unal iyo Sofian Chakla.
Real Madrid ayaan haysanin dersin ciyaartoydeeda kooxda koowaad ah, waxaana ganaax ah Casemiro iyo Nacho, halka ay dhaawacyo ku maqan yihiin Sergio Ramos, Ferland Mendy, Lucas Vazquez, Eden Hazard, Dani Carvajal iyo Raphael Varane oo xanuunsanaya.